Tips & Facts – nutri-knack
၂၀၂၀ ဖေဖဝါရီလအတွင်း ၂၀၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် ဝယ်ယူပြီး Deliecery Free အစီအစဉ်ကိုရယူလိုက်ပါ။
MMK USD EUR SGD
Get iOS Webapp
Get Android Webapp
Tea brew containsasmall level of vitamins such as thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin, biotin and inositol. Vitamin E is also present in tea. Although rich in potassium, the sodium content in tea is very low. This makes tea an ideal beverage for hypertensive individuals.
Tags: Green Tea Health Tea
အရေပြားဆရာဝန်နှင့်ပြသင့်သော လက္ခဏာ (၇) ချက်
ဝက်ခြံတွေ အများကြီးထွက်ရင် (သို့) သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ မှဲ့တစ်လုံးကိုတွေ့ရင် အရေပြားဆရာဝန်ကို သွားပြရမယ် ဆိုတာကို ကျွနု်ပ်တို့အများစု သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အရေပြားပေါ်က အပြောင်းအလဲများစွာက အမြဲဖြစ်နေပြီး အချို့အရာတွေက အရမ်းမဆိုးရွားသေးတဲ့အထိ မသိသာဘဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ်က အချက်ပြလက္ခဏာတွေအပေါ် မူတည်ပြီး အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ သွားပြသင့်တယ် ဆိုတာကို သတိမူမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အချို့လက္ခဏာတွေက ကုသရ လွယ်ကူပြီး စိုးရိမ်စရာ မရှိပေမယ့်လည်း မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်တဲ့လက္ခဏာ (7) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ပါးပြင် အမြဲနီနေခြင်း
အများစုက တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပါးရဲတတ်ကြပေမယ့်လည်း ပါးပြင် အမြဲနီနေခြင်းက ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါးပြင်မှာ လိပ်ပြာပုံစံအနီကွက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရေပြားလေးဖက်နာ SLE ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက မိမိရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကိုယ့်ဟာကို ပြန်တိုက်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သွေးစစ်ပြီး ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ SLE ရှိသူတွေမှာ ပါးပေါ်က အနီရောင်အကွက် ထတာနဲ့အတူ အလွန်အမင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အဆစ်များ နာခြင်း၊ ရောင်ခြင်းတွေပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေ တွေ့ကြုံရပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူပါ။
2. အသားအရေ အလွန်ခြောက်သွေ့ခြင်း
ဆောင်းတွင်းမှာ အသားခြောက်တာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပေမယ့် အချိန်တိုင်း ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အသားခြောက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ အသား အရမ်းခြောက်တာက သိုင်းရွိုက်ပြဿနာ တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် သွေးစစ်ကြည့်ပါ။ အချို့လူတွေမှာ အသား ပိုပြီးခြောက်သွေ့တာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့်လည်း အသားခြောက်တာနဲ့အတူ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း စတာတွေပါ ခံစားရပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အချို့လူတွေက သဘာဝအတိုင်း အသားအရေ ဖြူဖျော့ဖျော့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အသားအရေ ဖြူဖျော့လာတယ်ထင်ရင် သတိထားပြီး ကြည့်သင့်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရင် ဖြူဖျော့တတ်ပါတယ်။ အသားအရေ ဖြူဖျော့တာနဲ့အတူ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ ခြေလက်များအေးခြင်း စတာတွေကို ခံစားရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး စစ်ဆေးမှု ခံယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သွေးစစ်ဆေးပြီး သွေးအားနည်း အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး ဆရာဝန်က ဆေးညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
4. ဆံပင်များ ကျွတ်ခြင်း
နေ့တိုင်း ဆံပင်နည်းနည်းစီ ပံုံမှန်ကျွတ်လေ့ ရှိပေမယ့်လည်း ဆံပင်ကျွတ်တာ ပုံမှန်ထက် ပိုများလာတယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်သွားပြပြီး စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆံပင်တွေ အများကြီး ကျွတ်လေ့ရှိပေမယ့်လည်း ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့ အခြားအကြောင်းအရင်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာက သိုင်းရွိုက်ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့် (သို့) ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားကို ကိုယ်ပြန်တိုက်တဲ့ရောဂါ တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် သေချာစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုံမှန်ချွေးထွက်တဲ့ပမာဏခြင်း မတူကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ချွေးတွေ အများကြီး ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက Hyperhidrosis ဆိုတဲ့ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Hyperhidrosis ဆိုတာက မပူဘဲနဲ့၊ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘဲနဲ့တောင်မှ ချွေးအရမ်းထွက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးတွေ၊ ခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့ ကုသလို့ ရပါတယ်။
6. လက်သည်း ခြေသည်းများ ဝါခြင်း (သို့) ကျွတ်ဆတ်ခြင်း
လက်သည်းနီဆိုးလို့ လက်သည်းတွေ ခဏအဝါရောင်သန်းတာက ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း တစ်ခါတလေမှာ လက်သည်းမှိုစွဲခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုခံစားရပြီဆိုရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ သွားပြပါ။
7. ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာအောင် အနာ မပျောက်ခြင်း
အနာတစ်ခုခုက ရက်သတ္တပတ် အတော်ကြာတဲ့အထိ မပျောက်ဘူးဆိုရင် ဒါက ကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနာက ပျောက်ပြီးမှ ပြန်ဖြစ်တာ (သို့) ကောင်းကောင်း အနာမကျက်တာတွေက ရောဂါပိုးဝင်လို့ (သို့) ရောင်ရမ်းလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ်မှာ ဒီလိုအနာမျိုး ဖြစ်တာတွေ့ရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်
၁။ ကော်ဖီဟာ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားလ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလည်း ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကော်ဖီရဲ့ ရနံ့သင်းသင်းလေးက စိတ်အပန်းပြေကိုစေပြီး အခြားအနံတွေကို အနံခံအာရုံထဲကနေရှင်းထုတ်နိုင်လို့ ရေမွှေးအရောင်းဆိုင်တွေမှာ တစ်မျိုး နဲ့ တစ်မျိုး ရနံ့မရောအောင် ကော်ဖီရနံ့ရှုပြီးမှ နောက်တစ်မျိုးကို စမ်းကြပါတယ်။
၃။ ကော်ဖီကိုသောက်တဲ့သူတွေဟာ ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ ကော်ဖီမှာ စိတ်ခံစားမှု မကောင်းတာကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်ပြီး စိတ်ကျရောဂါကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဟားဗက်တက္ကသိုလ်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား ကျန်းမာရေး အင်စတီကျုစ့်တို့ရဲ့ လေ့လာမှုအရ တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ၄ ခွက် (သို့) ၄ ခွက်ထက်ပို သောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ၁၀ % ကနေ ၂၀ % အထိ ကျဆင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၅။ Antioxidant က ဆဲလ္ေတြ ပ်က္ဆီးတာကို တားဆီးေပးၿပီး အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗိုင္းရပ္ပိုးေတြ ၀င္ေရာက္ျခင္းကေနလည္း ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ျပီးေတာ့ အသီးအရြက္ေတြထက္ ေကာ္ဖီမွာ Antioxidant ပါ၀င္မႈ ပိုမ်ားပါတယ္။
မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (၁၀) မျိုး
ဒီအပတ်ပြောပြပေးမှာကတော့ ပျိုမေလေးတို့ မျက်နှာအလှအပ အတွက် တစ်ပတ်တစ်ခါ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း ၁၀ မျိုး ကို အသားအရေအမျိုးအစား အလိုက် ပြောပြပေးပါ့မယ်ရှင့်
စိုပြေလှပသော မျက်နှာအသားအရေလေး ရရှိစေရန် ပေါင်းတင်နည်း
ခရမ်းချဉ်သီး (၁)လုံး + နွားနို့ (၂)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။ အိပ်ရာ မဝင်ခင် ပြုလုပ်ပေးပါက မနက်ခင်းအိပ်ရာထချိန်တွင် စိုပြေလှပသော အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။
ဝက်ခြံရှိသော မျက်နှာအသားအရေအတွက် ပေါင်းတင်နည်း
ကြက်ဥ အကာ သီးသန့် (၁)လုံး + လီမွန် (၂)ဇွန်း + ပျားရည် (၂) ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
ဝက်ခြံ အမဲစက် ရှိသော မျက်နှာအသားအရေအတွက် ပေါင်းတင်နည်း
သစ်ဂျပိုးခေါက် (၁)ဇွန်း + ပျားရည် (၂)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
မွဲခြောက်သော မျက်နှာအသားအရေအတွက် ပေါင်းတင်နည်း
ကော်ဖီ (၂)ဇွန်း + ပျားရည် (၂)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
နေလောင်ထားသော မျက်နှာအသားအရေအတွက် ပေါင်းတင်နည်း
ဒိန်ချဉ် (၂)ဇွန်း + လီမွန် (၂)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
အဆီပြန်သော မျက်နှာအသားအရေအတွက် ပေါင်းတင်နည်း
ဆနွင်း (၁)ဇွန်း + Aloe Vera Jel (ရှားစောင်းလက်ပတ်) (၂)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
မျက်နှာအရေးကြောင်းများ လျော့ပါးစေရန် ပေါင်းတင်နည်း
ကြက်ဥ (၁)လုံး + Aloe Vera Jel (ရှားစောင်းလက်ပတ်) (၂)ဇွန်း ကိုရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။ ၁၀မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
ခြောက်သွေ့သော အသားအရေ ရရှိစေရန် ပေါင်းတင်နည်း
လီမွန် (၂)ဇွန်း + ပျားရည်(၁)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။
ကြည်လင်သော အသားအရေ ရရှိစေရန် ပေါင်းတင်နည်း
နနွင်း ၄ပုံ ၁ပုံ (စားပွဲတင်ဇွန်း) + Coconut Oil (၁)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။
အမဲစက် များအတွက် Deep Cleaning ပေါင်းတင်နည်း
ဂျုံမှုန့် (၁)ဇွန်း + ဒိန်ချဉ် (၂)ဇွန်း ကို ရောဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာသော်အခါ ရေနွေးနွေး လေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။
Check Post Code of Myanmar
© 2021 nutri-knack |Own By Asclero Company Limited |